I-Israel ivala iindwendwe ezivela kumazwe asixhenxe akumazantsi e-Afrika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-Israel Iphula Iindaba » I-Israel ivala iindwendwe ezivela kumazwe asixhenxe akumazantsi e-Afrika
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zaseBotswana eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba Eziphulayo Eswatini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • I-Israel Iphula Iindaba • Iindaba zaseLesotho • Iindaba zaseMozambiki • Iindaba zaseNamibia eziziiNdaba • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseZimbabwe
Ukwandiswa koluhlu 'olubomvu' bekuyimfuneko ngenxa yokubhaqwa kweenzululwazi zaseMzantsi Afrika kolunye uhlobo olutsha lwe-COVID-19 kummandla osemazantsi e-Afrika, ngokweOfisi ye-PM.
I-Ofisi yeNkulumbuso yakwa-Israel ibhengeze namhlanje ukuba uMzantsi Afrika kunye namanye amazwe amathandathu ase-Afrika afakwe kuluhlu lwamazwe 'obomvu' akwaSirayeli.
Ukwahluka - okubizwa ngokuba yi-B.1.1.529 - "kuneenkwenkwezi ezingaqhelekanga" zokuguqulwa kwezakhi zofuzo, ezixhalabisayo ngenxa yokuba zinokukunceda ukubaleka impendulo yomzimba kwaye zenze ukuba zisasazeke ngakumbi, izazinzulu zixelele iintatheli kwinkomfa yeendaba eMzantsi Afrika.
Kulandela intlanganiso, ebibanjwe yiNkulumbuso ye Sirayeli UNaftali Bennett, amazwe asixhenxe aseAfrika - Mzantsi Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia kunye ne-Eswatini - zibandakanyiwe kuluhlu lwamazwe "abomvu", okanye amazwe amaSirayeli angavumelekanga ukuhamba kuwo, ngaphandle kokuba bafumana imvume ekhethekileyo kwinkonzo yezempilo yakwaSirayeli.
AmaSirayeli abuyela ekhaya evela kula mazwe kuya kufuneka achithe phakathi kweentsuku ezi-7-14 kwihotele ehlala yedwa emva kokufika.
Abakhenkethi abasuka kula mazwe ase-Afrika abasayi kuvunyelwa ukuba bangene kwaSirayeli, yatsho iOfisi yeNkulumbuso.
Sirayeli irekhode i-1.3 yezigidi zeemeko eziqinisekisiweyo ze-COVID-19 kwaye ngaphezulu kwe-8,000 yasweleka oko waqala ubhubhane.
Ngokutsho koMphathiswa wezeMpilo welizwe, yi-57% kuphela Sirayeli Abemi be-9.4 yezigidi bagonywe ngokupheleleyo.